> Resource > Android > 1 Click si ay u gudbiyaan Xiriirada ka macruufka in Android 4.4, KitKat
Tan iyo Google sii daayay Android 4.4, KitKat, taageerayaal badan Android iska ilaawaan ay macruufka qalab loogu Nexus 5. Waa fud in ay beddelaan telefoonka ah, laakiin xiriir wareejinta dhexeeya laba telefoonada socda dhufto ee kala duwan soo baxday in ay wax yar ka xeelad badan. Ka dib oo dhan, waana mid aad u waqti lumis in nooca xiriirrada iyo taleefan lambarrada mid mid. Taa ka sii daran, kaararka SIM ku Android iyo qalab macruufka ah ma aha kuwo isku qiyaas, taas oo macnaheedu yahay si toos ah ma aad gelin kara kaadhka SIM qalab macruufka ah ee ah in ay Android phone xiriirada.
Careysan oo ku saabsan? Isdeji. Halkan yimaado barnaamijka xiriir kala iibsiga ah oo aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan oo dhan xiriir la leh ay ka buuxaan info ka macruufka in Android 4.4, KitKat. Haddii aad saxiixdo ee Gmail, Yahoo !, iCloud, iyo xisaab badan oo ku saabsan qalab macruufka, xiriirada iyaga in sidoo kale lagu wareejiyo aad. Taasi waa Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Download version maxkamad la'aan ah computer oo la siiyo shot a.
In ay qayb ka socda, waxaana idin tusin sida ay u gudbiyaan xiriirada ka macruufka in Android KitKat la version Windows ah.
Tallaabooyinka fudud ee macruufka in Android 4.4, kala iibsiga KitKat xiriir
Tallaabada 1. Orod barnaamijka xiriir kala iibsiga kombiyuutarka
Marka hore, soo dajiyo iyo barnaamijka xiriir kala iibsiga - Wondershare MobileTrans ah - kombiyuutarka socda Windows OS. By gujinaya Start , waxaad ka heli suuqa kala iibsiga telefoonka.
waa Lugood lagu rakibi in la damaanad qaado in Wondershare MobileTrans u shaqeeyo hab sax ah.
Tallaabada 2. Connect labada macruufka iyo Android qalabka kombiyuutarka
Bareesada in fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan labada macruufka qalab iyo qalab Android la 4.4, KitKat in kombiyuutarka. Barnaamijka xiriir kala iibsiga iyaga si toos ah lagu ogaan doonaa, oo iyaga tusin uu furmo suuqa hoose. Ka sokow, dhammaan faylasha ku taageeray wareejinta waa la saxay. Sidaa awgeed, si ay u gudbiyaan xiriirada ka macruufka in Android 4.4, KitKat, waxaad u baahan tahay uncheck faylasha kale.
By gujinaya Flip u dhexeeya labada telefoonada, waxaad ka Android wareejin karaan xiriirada in macruufka.
Tallaabada 3. Nuqul macruufka xiriirada si Android 4.4, KitKat
Waa markii. By gujinaya Start Copy , waxaad ka heli wada hadal la xiriir kala iibsiga ah. Waxaa soo bilaabo, waxaad eegi kartaa bar horumarka kala iibsiga xiriir ah. Riix OK marka suuqa kala iibsiga xiriir la dhammeeyo.